नेपाल दृष्टान्त | News Portal in Nepal
२०७७ असार २२ सोमबार १२ : २२ : ४०
प्रदेश १प्रदेश २प्रदेश ३प्रदेश ४प्रदेश ५प्रदेश ६प्रदेश ८
शिक्षा/स्वास्थ्यकला/साहित्यविचार /ब्लगसूचना प्रविधि
सय बर्षभन्दा बढी बाँच्नेहरुको खानपान र जीवनशैली कस्तो छ ?
२०७७ जेठ १७ शनिवार
केरोना भाइरसको कारण धेरैजनाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोना मात्र होइन यस्ता थुप्रै रोग छन्, जसले मान्छेलाई पूर्ण आयु बाँच्न दिएकोृ छैन । पुरा आयु बाँच्न नपाई मृत्युको मुखमा धकेल्दैछ ।
यस्तो पृष्टभूमीमा कसैले ‘जीवेत शरदः शतम्’ अर्थात सय बर्ष बाँच्ने आर्शिवाद दिन्छन् भने के त्यो आर्शिवाद सत्य सावित होला ? आखिर कसरी सय वा त्यो भन्दा बढी बर्ष बाँच्न सकिन्छ ?
यो प्रश्नको जवाफ खोज्न हामी त्यही भेगका मानिसहरुलाई भेट्न सक्छौं, जहाँका मानिसहरु तुलनात्मक रुपमा लामो आयु बाँच्छन् । अक्सर सय बर्ष भन्दा बढी ।
आखिर लामो उमेरको राज के हो ? त्यस भेगका मान्छेहरु सबैभन्दा बढी कति बर्षसम्म बाँच्छन् ?
मध्य अमेरिकी मुलुक कोस्टारिकाको निकोया, इटलीका सार्डीनिया, युनानको इकारिया, जापानको ओकिनावा र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाको राज्य लिन्डा । यो विश्वका त्यस्ता ६ स्थान हुन्, जसलाई वैज्ञानिकले ‘ब्लु जोन’ भनेका छन् । यी स्थानमा बसोबास गर्नेहरुको उमेर बाँकी विश्वकै मान्छेहरुको भन्दा बढी छ । उनीहरु सय बर्षभन्दा बढी उमेर बाँच्ने गर्छन् ।
इटलीका महामारी विशेषज्ञ गियान्नी पेश र बेल्जियमका आबादी विशेषज्ञ माइकल पोउलेनले यी भेगलाई सबैभन्दा पहिला ‘ब्लु जोन’को संज्ञा दिएका थिए । त्यसपछि पेस र पोउलेनसहित अमेरिकी पत्रकार डैनी ब्युटेनर मिलेर यी ६ स्थानको बारेमा पुस्तक समेत लेखे ।
लामो आयुको रहस्य
डैनी ब्यूटेनरले आफ्नो पुस्तकका लागि खोज गरिरहँदा के पाए भने ब्लु जोनमा रहनेहरुको जिन्दगीको केही खास विशेषता थियो ।
पहिलो कुरा त खानपान । ब्लु जोनमा रहने व्यक्तिहरु कम खाना खान्थे । जस्तो कि, जापानको ओकिनावमा मान्छेहरु ८० प्रतिशत पेट भरिएपछि खाना छाड्थे । वैज्ञानिकहरुले भन्दै आएका छन् कि यदि हामीले १० प्रतिशत कम क्यालोरी लिने हो भने यसले उमेर बढ्नेको गति धीमा बनाइदिन्छ । अर्थात आयु बढ्छ ।
हार्वर्ड युनिभर्सिटीका जीवन विशेषज्ञ डी. गोविन्दराजु भन्छन् कम खानाले हाम्रो डीएनएमा हानिकारक परिवर्तन हुँन पाउँदैन ।
अर्को कुरा, ब्लुज जोनमा रहने व्यक्तिहरु शाकाहारी खानामा जोड दिन्छन् । यसले पनि उनीहरुको मेटाबोलिज्म अर्थात खाना पचाउने क्षमतामा सकारात्मक असर पर्छ ।
खानपानका आनीबानीका साथै ब्लु जोनमा रहने व्यक्तिहरुको सामाजिक जीवन पनि महत्वपूर्ण रहेछ । यी सबै क्षेत्रका मान्छेहरु यस्तो समुदायमा रहन्छन्, जसको बीच आपसी सम्बन्ध बलियो र सुमधुर छ । विभिन्न अध्ययनबाट के थाहा भएको छ भने सामाजिक सम्बन्ध बलियो र सुमधुर हुँदा त्यसले तनाव कम गर्छ । मित्रता वा सामाजिक सम्बन्ध हाम्रो मानसिक र शारीरिक गतिविधिका लागि राम्रो मानिन्छ । राम्रो सम्बन्धले हाम्रो स्वास्थ्यमा त्यस्तै किसिमको प्रभाव पाछर्ट जसरी खानपानले ।
सय बर्षभन्दा बढी उमेरसम्म बाँच्नका लागि धार्मिक आस्थाले पनि अह्म भूमिका खेलको छ । किनकी ब्लु जोनमा बस्नेहरु धार्मिक आस्था राख्नेहरु छन् । जस्तो कि क्यालिफोर्नियाको लोमा लिन्डामा बस्नेहरु सेभेन्थ डे एडवेन्टिस्ट चर्चका अनुयायी हुन् । त्यसैगरी कोस्टारिकाको निकोया र इटलीका सार्डीनियामा बस्नेहरु क्याथलोकि ईसाई हुन् । ग्रीसको इकारिया द्विपमा बस्नेहरु ग्रीक अर्थोडक्स चर्चमा विश्वास गर्छन् ।
डैन ब्युटेनरले आफ्ना पुस्तकमा लेखेका थिए कि उनले ब्लु जोनमा करिब अढाई सय मान्छेसँग कुराकानी गरे । उनीहरु सबै कुनै न कुनै आध्यात्मिक समुदायका हिस्सा थिए ।
धर्मिक आस्थाले हाम्रो जीवनमा धेरै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ । यदि तपाईं दुःखी वा समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने आध्यात्मिक शरण लिनुहोस्, यसले तपाईंलाई लाभ मिल्नेछ ।
एक कप चिया र कफी
ग्रीसको इकारिया द्वीपमा बस्नेहरु दिनमा केही पटक चिया वा कफी पिउने गर्छन् । जानकारका अनुसार दिनमा यी तातो पेय पदार्थको सेवनले मुटुको रोग टाढा राख्छ । किनकी यसमा केही पोषक तत्व हुन्छ, जस्तो कि म्याग्नेसियम, पोटासियम, नियासिन र भिटामिन इ पाइन्छ ।
यी पेयको मद्दतले टाइप २ डाइबिटिजबाट बचाउँछ । साथै खाना पचाउनमा पनि सहयोग गर्छ ।
मीठो तीतो समाधान
जापानको ओकिनावा द्वीपमा बस्नेहरु सखरखण्ड र करेला अत्याधिक मात्रामा खाने गर्छन् । खरखण्डमा भिटानि ए, सी र इ प्रचुर मात्रामा हुनछ । यसमा पाइने पाटोशियमले ब्लड प्रेसर नियन्त्रण गर्छ । शखरखण्डमा फाइबर पनि पर्याप्त हुन्छ । यसैगरी करेलाले मधुमेहको जोखिमबाट बचाउँछ ।
ब्लु जोनको संज्ञा दिइएका स्थानहरु प्राकृतिक रुपमा पनि सुन्दर छन् । जस्तो कि इटलीका सार्डीनिया । यो पहाडी भेग एकदमै सुन्दर छ । यहाँ खेती गर्नेहरु पहाडमा चढ्ने र झर्ने गर्छन् ।
कुल मिलाएर भन्ने हो भने ब्लु जोनमा रहने व्यक्तिहरुको लामो उमेरको रहस्य एक मात्र छैन, अनेक छन् ।
फल र सब्जीको भरपुर सेवन तर खाना कम । नियमित रुपले शारीरिक श्रम वा काम गर्नु । कफी पिउनु । आफुमा आध्यात्मिक गुणको विकास गर्नु ।
बिबिसी हिन्दी अनलाइनबाट
नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ३५ पुग्यो
साेमबार थप १८० जनामा काेराेना पुष्टि, काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५४ जना संक्रमित
अब बिनामास्क घरबाहिर निस्किए पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन
नेपाल वायुसेवा निगमका ३ पाइलटसहित १४ कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि
कुलमान घिसिङका बुबाको निधन
कोरोनाको औषधि पत्ता नलाग्दा पनि कसरी बाँचे विश्वका ६० लाख बढी कोरोना बिरामी ?
मौसम पूर्वानुमानः शुक्रबारदेखि तीन दिनसम्म बाढीको जोखिम, प्रदेश १ र २ बढी प्रभावित हुने
सेनाले सम्मानसहित व्यवस्थापन गर्‍यो बागलुङका कोरोना संम्रिकतको शव
आजदेखि ५० रुपैयाँको नयाँ नोट चलनचल्तीमा
६३ जना सहसचिवहरु सरूवा
साेमबार पनि घट्यो सुनको मूल्य
यी हुन् नेपाली बालिकाको ब’लात्कारपछि ज्यान लिने भारतीय नागरिक
Chabahil, Kathmandu Nepal
नेपाल दृष्टान्त कम्पनी (प्रा.) लि,
© Copyright 2020 नेपाल दृष्टान्त कम्पनी (प्रा.) लि.
Developed by An4soft